Yusuf Garaad: Aniga iyo Laptop-keyga - Saaxiibbo aan is Aqoon
MacBook Air-keyga waxaan ku aqaan in uu yahay mid maskaxdeyda kaba.
Intaa wax baan ka akhristaa. Cod baan ka dhegeystaa. Muuqaallo xargagan iyo kuwa dhaqaaqaya ayaan ka daawadaa. Xogteyda ayaan ku keydsadaa. Waxaan ku qoraa xogta aan akhristayaasheyda la wadaagayo oo ay ka mid yihiin sadarrada aad hadda akhrineyso.
Marmar isaga ayaa ila taliya ama i tilmaama. Laakiin saaka waxaan ogaaday in aniga iyo computer-keygu aynaan weli si fiican isu aqoon.
Maskaxdeydu waa ay og tahay in aan Soomaaliya ka soo tegey. Laakiin jirkeygu wuxuu la hasytaa wakhtiga Soomaaliya. Xilli halkaan weli habeen ah ayaa jirkeygu i soo toosiyay, asaga oo mooda in hurdo ila tagtay oo galab aan joogo sida dalkii aan ka imid.
Markii aan shiday compiyuutarka waan qiyaasayay in uu isagu og yahay magaalada aan joogo. Wuxuu igu yiri, waa maalin doorasho ee kac oo codkaaga dhiibo. Bar ayuu ii tilmaamay uu i leeyahay dhag-sii si aad u ogaato sida aad ku tegi karto 1,205 goobood oo New York laga codbixinayo.
New York waa magaalada ugu weyn Mareykan. Waa magaalada ay maanta indhaha adduunku hayaan. Waa magaalada ay ku sugan yihiin labada murashax ee ku tartamaya doorashada Madaxweynaha Mareykan oo maanta dhacaysa.
Jaziiradda Manhattan oo igu dad badan 5-ta xaafadood ee NY
Waa New York magaalada ay labada murashax ay caawa ku daawanan doonaan marka ay natiijadu billowdo in ay iska soo daba dhacdo.
Waa magaalda la filayo in labada murashax midkood uu isaga oo ay hor taagan yihiin taageerayaal badan kaga dhawaaqi doono in uu guuleystay oo uu yahay Madaxweynaha dooran.
Doorashadaan waxaa codeeya dadka Mareykanka oo keliya, laakiin saameynteeda tooska ah ama dadban waxaa laga dareemaa dunida oo dhan.
Dad iyo Dowlado aan Mareykan ahayn ayay saameysaa siyaaddooda, qaar kale waxay saameysaa nolosha, fursadaha iyo horumarkooda, qaar dhaqaalahooda, qaarna waxay saameysaa amnigooda.
Kombiyuutarka oo mararka qaar iga feejigan mar kastana iga xusuus badan sideen u baraa in doorashadani ay aniga iyo isagaba ay na saameyn karto, laakiin aynaan cod ku lahayn!
Posted by Yusuf Garaad at 11:46:00